Ogaden News Agency (ONA) – Noora Afgaab : Jaamacadda Jigjiga oo kacdoon uu ka jiro iyadoo Itobiya aan la saadaalin karin xaaladeeda
Noora Afgaab : Jaamacadda Jigjiga oo kacdoon uu ka jiro iyadoo Itobiya aan la saadaalin karin xaaladeeda
Waxaa cirka isku sii shareeraya kacdoonkii ay bilaabeen ardayda oo hadda noqday mid shacabi ah. Banaabaxyada ayaa hadda wada gaadhay dhamaan magaalooyinka waaweyn ee Itobiya gaar ahaan Gobolka Oromiya iyo magaalooyinka waaweyn ee Amxaarada ay dagaan. Banaabaxyadan oo markii hore ku bilowday diidmo shacabka Ormada uu kuu diidan yahay dhul balaadhinta magaalada Adisababa ama waxa loogu yeedhay -Addis Ababa Master Plan- kaasoo ay shacabka Oromada u arkeen inuu yahay barnaamij la doonayo in beeralayda ku teedsan caasimadda ee Ormada ah in dhulka looga qaato.
Banaabaxaa ayaa markii arday badan lagu laayay qaar kaloo badanna lagu dhaawacay waxaa ku gadooday shacabkii oo iyagoon u kala hadhin bilaabay banaabaxyo lagu diidan yahay Xukuumadda EPRDF/TPLF. Banaabaxyadan ayaa u eg kuwii gilgilay dalalka Carabta ee Tunis iyo Masar, waxayna dadka aan la hadalnay noo sheegeen inuusan joogsan doonin si kasta oo xukuumadda Wayaanaha ay isugu daydo inay u cabudhiso.
Waxaa shalay iyadana lagacabsaday in Jaamacadda Jigjiga ay banaanbaxyo xoog leh sameeyaan, waxaana jamaacadda gudaha u galay ciidan ka kooban militariga iyo Hawaarinta oo boqolaal ah. Waxaa horkacay ciidankaa Ina Laba Go’le oo si kulul ugu hanjabay ardaydii kuna yidhi aradydii intaan idin layno ayaan buurahaa idinku aasaynaa iyadoon cidina na ogaanin. Halkan Jigjiga ayaa la yidhaahdaa ayuu ugu hanjabaya, isagoo raaciyay caalamka oon idin ogaanin ayaan dhamaantiin idin layni hadaad dhaq-dhaqaaq samaysaan. Ilaa hadda way dagan tahay xaaladda magaalada, lamase saadaalin karo meesha ay ku dambayn.
Maalmaha soo socda waxaa lahadal hayaa inay Itobiya dhan un u jeedsan doonto.